लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनकाे नयाँ बोनस दर सार्वजनिक, कुन याेजनामा कति बाेनस ? - Arthasansar
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनकाे नयाँ बोनस दर सार्वजनिक, कुन याेजनामा कति बाेनस ?
सोमबार, ०६ मंसिर २०७८, १२ : ४८ मा प्रकाशित
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडले नयाँ बाेनस दर कायम गरेकाे छ ।
कम्पनीले बीमा समितिबाट कार्तिक ३० गते स्वीकृत भए अनुसार विभिन्न प्रकारका बीमा योजनाहरूकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस दर सार्वजनिक गरेको हाे ।
कम्पनीले सावधिक जीवन बीमा, जीवन विद्या, जीवन साथी बीमा योजनामा प्रति हजार न्यूनतम न्यूनतम ५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस कायम गरेकाे छ । यस्तै, कम्पनीकाे जीवन आनन्द र बाल सवाधिक बीमा योजनामा न्युनतम ५५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, धनवृष्टि बीमा योजनामा ५५ रुपैयाँ र धन फिर्ता बीमा योजनामा न्युनतम ५६ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँसम्म बाेनस पाइनेछ । कम्पनीकाे बाल ममता बीमा योजनामा न्युनतम ५५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँसम्म बाेनस पाइनेछ । यस्तै, कम्पनीकाे जीवन तंरग बीमा योजनामा न्युनतम ५६ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६७ रुपैयाँ र जीवन बचत बीमा योजनामा ४५ रुपैयाँदेखि ६६ रुपैयाँसम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले सार्वजनिक गरेको नयाँ बोनस दर यस प्रकारकाे छ :